ट्रम्फले “आतंकवादी”संगठनको रूपमा घोषणा गर्ने भनेका ‘एन्टीफा’ बारेका सात तथ्य – Lokpati.com
पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका चितवन राशिफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार मृत्यु नेकपा नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Jun 1, 2020
काठमाडौं, १९ जेठ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विरोधी समूह एन्टीफा (फासिस्टविरोधी) लाई “आतंकवादी”संगठनको रूपमा घोषणा गरिने बताएका छन। ट्रम्पको आरोप छ एन्टिफाले अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लडको मृत्युको विरोधमा दंगा फैलाए। गोरे पुलिस अफिसरको हातमा कालो नागरिक जर्ज फ्लडको मृत्यु भएको घटनामा सोमबार लगातार छैटौं दिन संयुक्त राज्यमा हिंसात्मक प्रदर्शन जारी छ।
प्रदर्शनको कारण, कम्तिमा ४० शहरहरुमा कर्फ्यू लगाईएको छ तर त्यसो भए पनि मानिस सडकमा उत्रिरहेका छन्। न्यु योर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया र लस एन्जलसमा पुलिस र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ।आन्दोलनकारीहरुलाई तितरबित गर्न प्रहरीले अश्रु ग्याँस प्रहार गर्नु पर्छ। धेरै ठाउँमा मानिसहरू पुलिसको गाडीमा आगो हालेका छन् र पसलहरू लुटेका छन्।
सोमबार, ४६ वर्षीय निशस्त्र काला नागरिक जर्ज फ्लोड संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिनेसोटामा मारिए।
उनको मृत्युको भिडियो खुल्यो जसमा डेरेक चौविन नाम गरेका एक पुलिसकर्मी आठ मिनेट भन्दा बढी उनको घाँटीमा घुँडा टेकेका देखिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा भने कि “एन्टिफाको नेतृत्वमा रहेको अराजक तत्वहरू र कट्टरपन्थी वामपन्थीका अराजक तत्वहरूले यस हिंसाको लागि जिम्मेवार छन्। ”
यद्यपि उनले यसबारे अरु कुनै जानकारी दिएका छैनन्। उनीहरूले कहिले र कसरी एन्टिफालाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्ने बारेमा पनि भनेका छैनन्।
एन्टिफाको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने ७ कुराहरुः
इन्टरनेटमा चल्दै आएको दक्षिणपन्थी समूह र फासिस्ट विरोधी एन्टिफाबीचको लडाई अब अमेरिकाको सडकमा पुगेको छ। तर एन्टिफामा सदस्यहरू को हुन् र यो समूहले के प्रतिनिधित्व गर्दछ? यस समूहको बारेमा थप जानकारीको लागि, अनीसा सुभेदार र माइक वेन्डलिंगले संयुक्त राज्य अमेरिकाको पश्चिम तट भ्रमण गरे।
कहिलेबाट एन्टिफा अस्तित्वमा छः
समूहसँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको समूह सन् १९२० र १९३० को दशकमा युरोपियन फासिस्ट शक्तिहरूको बिरूद्ध आन्दोलनको साथ अस्तित्वमा आए। मार्क ब्रे,“एन्टीफाः द एन्टि फासिस्ट ह्यान्डबुक” का लेखक भन्छन्, आधुनिक अमेरिकी एन्टिफा आन्दोलन १९८० को दशकमा शुरू भयो र यो एन्टि रेसिस्ट एक्शन भनिने समूहबाट सुरु भयो।
यस समूहका सदस्यहरूले अमेरिकाका केही स्थानहरूमा नव—नाजीवादको विरोध गरे। तर २००० को शुरुमा यस आन्दोलन लगभग सकियो। हालसालै, डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति बन्ने र रूढीवादीहरूको उदय भएदेखि यो आन्दोलनले फेरि एकपल्ट टाउको उठाइरहेको छ।
एन्टिफाको उच्चारण कसरी गरिन्छ?
मार्क ब्रेका अनुसार यो एक शब्द धेरै तरिकाले भनिएको छ। अमेरिकाका अधिकांश मानिसहरूले यसलाई एन्टीफा भनिन्छ। युरोपमा यसलाई कहिलेकाँही एन्टी-टावर पनि भन्छन। ब्रे विश्वास गर्दछन् कि यसको उच्चारण इटालियन शब्द एन्टि-फासिज्मोबाट प्रेरित हुन सक्छ।
एन्टिफाले कसको विरोध गर्छ?
यस समूहका व्यक्ति वा यस विचारधारासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू नव-नाज्यवाद, नियो-फासिज्म, सेतो अतिवादी (गोरा व्यक्तिलाई उत्कृष्ट मान्ने विचारधारा) र जातीय विभेद जस्ता रूढीवादीवादी दक्षिणपन्थी विचारधाराको बिरूद्ध आवाज उठाउँछन्। हालसालै यो समूहले पनि दक्षिणपन्थी विचारधाराको विरोध गरेको छ। ओरेगनमा कार्यरत एन्टिफा समूहसँग कुरा गर्दै उनले भने, उनीहरु धेरै प्रकारका राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित छन्, तर यी समूहहरू फासीवादको विपक्षमा एकताबद्ध छन् र सरकार विरोधी विचारधारा रहेको छ।
उनीहरू भन्छन कि हालसालै अमेरिकी प्रशासन निरंकुशतातिर बढेको छ र उनीहरु एक आन्दोलन सिर्जना गर्न चाहन्छन् जसले “राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको बिरूद्ध हामीलाई सुदृढ पार्छ।” समूहका एक सदस्यले भनेका छन्, “यी केवल संघीय सरकारको विरोध गर्ने मात्र होइन तर देशलाई फासीवादतर्फ डोर्याउन सक्ने कदमहरूको विरोध गर्नु पनि हो। त्यस्ता कदमहरूले स्थानीय तहमा अधिकार पनि लिएको छ।”
किन यी सबै मानिसहरूले सधैं कालो कपडा लगाउँछन्?
पश्चिमी जर्मनीका अराजकतावादीहरूदेखि लिएर शीतयुद्धसम्म एन्टिफाको विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूले सबै विरोध प्रदर्शनमा कालो लुगा लगाउँदछन्। धेरै चोटि यी व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुहार मास्क लगाउँदछन् वा हेलमेट लगाउँदछन् ताकि पुलिस वा विरोधीले उनीहरूलाई चिन्न नसकुन।
एक तरीकाले, यो एक ड्रेडेड विधि पनि हो जुन “कालो ब्लक”भनेर चिनिन्छ। यस तरिकाले तिनीहरू अपरिचितहरूको समूहको रूपमा बस्न सक्दछन्। यद्यपि एन्टिफा समूहबाट अन्य धेरै समूहहरू पनि देखा परेका छन्। ओरेगनमा त्यहाँ “स्न्याक ब्लक” भनिने समूह छ जुन प्रदर्शनकारीहरुका लागि खानाको व्यवस्था गर्दछ।
यो समूहले कुन विधि अपनाउँछ?
एन्टीफा प्रदर्शनकारीहरूले रूढीवादी, दक्षिणपन्थी कार्यक्रम र नेताहरूका कार्यक्रमहरूमा कठिनाईहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छन्। यसको लागि, तिनीहरू विभिन्न विधि अपनाउँछन् -आवाज निकाल्ने, गीतहरू गाउने र दक्षिणपन्थी प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न मानव श्रृंखलाहरू बनाउने। केहि व्यक्तिहरु सामाजिक मिडिया मा दायाँ पट्टि विचारधारा को लागी पोस्ट मा नजर राख्छन्। यी व्यक्तिहरूले इन्टरनेटमा उनीहरूको विरोधको व्यक्तिगत जानकारी जारी गर्छन्। यो गरेर, यी व्यक्तिहरूले धेरै पटक दायाँ(पट्टि समर्थकहरूलाई जागिरबाट बाहिर निकाल्नको लागि व्यवस्थित गरेका छन्। एन्टीफा समूहहरूले जुलुस र विरोध जुलुस पनि आयोजना गर्छन्। उही समूहमा केही हिंसात्मक तत्वहरू पनि कागजको औठी, चाकू, ईंट र चेन बोक्छन् प्रदर्शनको क्रममा।
यस समूहका मानिसहरू कत्तिको हिंस्रक हुन सक्छन्?
एन्टिफा समूहले प्रदर्शनको क्रममा हिंसा प्रयोग गर्न तयार हुने सोचाइले उनीहरूलाई अन्य वामपन्थी कार्यकर्ताहरूबाट टाढा राख्छ। यद्यपि एन्टिफा समूहका धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूले यो हिंसाको निन्दा गर्छन्। तिनीहरू भन्छन, यदि हिंसा कहिले भयो, यो आत्म-रक्षाको लागि मात्र हुनुपर्छ। आफ्नो तर्कलाई प्रमाणित गर्न उनी तर्क गर्छन कि यदि जर्मन नाजी पार्टीका विरोधीहरूले १९३० को दशकमा बढी शक्ति प्रयोग गरे, के तिनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध र प्रलय रोक्न सक्थे? एन्टिफा समूहका मानिसहरूले दक्षिणपन्थी चरमपन्थीहरूको प्रत्यक्ष सामना गरेको बेलामा यस्ता घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन्। केहि अबस्थाहरूमा, तिनीहरूले जुलुसहरू रद्द गर्न, स्थगित गर्न र घटनाहरू बीचमा रोक्ने व्यवस्था गरेका छन्।
के त्यहाँ एन्टीफा समूहमा महिलाहरू छन्?
परम्परागत रूपमा, अधिकांश पुरुषहरू सडक प्रदर्शनमा संलग्न हुन्छन्, तर क्यालिफोर्निया र अन्यत्र प्रदर्शनको क्रममा एन्टिफाका धेरै महिलालाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरू भन्छन् कि महिलाहरू आप्रवासन, किफायती स्वास्थ्यसेवा, गर्भपतन अधिकार र मतदान अधिकार सम्बन्धी सरकारी नीतिहरूले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। एन्टीफा समूहबाट रिसेज फासिज्म सम्बन्धी संसारा टेलर भन्छिन् कि महिलाहरू बढी संलग्न भइरहेको छ किनकि उनीहरुलाई लाग्छ “यी मुद्दाले उनीहरुलाई असर पार्छ।” ( बीबीसी )
८२ जनामा डेंगु देखियो, २६ जिल्लामा संक्रमण
अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री र बेल्जियमका राजकुमारमा कोरोना संक्रमण
सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिनु हाम्रो लागी इज्जतको कुरा होः डोनाल्ड ट्रम्प